Ifulethi elisha, enkabeni yeCascais, eduze nolwandle
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-José Maria
Ifulethi elilungiswe ngokuphelele enkabeni yomlando yeCascais, lilungele labo abafuna indawo enhle. Isuphamakethe, ikhemisi, izindawo zokudlela, amabha, izindawo zokudla kanye namabhikawozi, endaweni eyi-100m.
Ehlobo, kungase kube nomsindo womculo ebusuku, ikakhulukazi ngoLwesihlanu nangeMigqibelo
Itholakala eCascais bay, 50mts ukuya ogwini oluseduze, kanye nokuhamba ngezinyawo okungu-5mn ukusuka eCascais Marina.
Indawo yokupaka ekhokhelwayo engu-50mts, nendawo yokupaka yomphakathi, ekhokhelwa phakathi kuka-9am no-8pm, emigwaqweni ezungezile.
Ifulethi elingamamitha-skwele angama-35 elinegumbi lokulala eli-1 (elinovulandi), igumbi lokuhlala elingu-1 (elinombhede usofa), ikhishi nendawo yokugezela.
4.62 ·55 okushiwo abanye
4.62 out of 5 stars from 55 reviews
4.62 · 55 okushiwo abanye
Ifulethi limaphakathi kakhulu, liseduze kakhulu nesikwele esikhulu saseCascais, lapho kutholakala khona izindawo zokudlela ezihamba phambili namashibhi. Ebusuku bezinyanga zasehlobo, ikakhulukazi uJulayi no-August, kungase kube nomsindo omncane (umculo), ngenxa yokuba phakathi kwawo. Seluleka abantu abalalayo ukuthi basebenzise ama-ear plug, ikakhulukazi ebusuku bezimpelaviki.
Ibungazwe ngu-José Maria
Ihlala itholakala ukusiza, ukunikeza amathiphu nezeluleko. Ngokujwayelekile akungithathi ngaphezu kwe-30mn ukuphendula.
Inombolo yepholisi: 51780/2018